Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Iniinaha Sisinta Hadda Dib Loogu Soo Celiyaa Salmonella awgeed
Makhaayadda Dabeecadda ayaa dib u soo celinaysa iniinaha sisinta ee Org ee ka soo baxay suuqa sababta oo ah sumowga Salmonella ee suurtogalka ah. Badeecada dib loo celiyay waa la iibiyay sida ku cad shaxda.
• Sumadda: Midna
• Badeecada: Org iniinaha sisinta ee la jarjaray
• Shirkadaha: Makhaayadda Dabeecadda
Arrin: Cunto - Wasakhowga Microbial - Salmonella
Qaybta: Miraha, badarka, iyo iniinta
Waxa la sameeyo: Ha cunin alaabta dib loo soo celiyay
• Dhageystayaasha: Dadweynaha guud
• Kala soocida khatarta: Fasalka 2
Badeecadaha ay saamaysay
brand Product size UPC Xeerarka Qaybinta
None Org sisinta la jarjaray La beddeli karo -
karraanigii la iibiyay ayaa u adeegay Laga bilaabo 200516 Dhammaan cutubyada laga iibiyay
Oktoobar 8, 2021 ilaa Noofambar 16,
2021 loo dhan yahay lagu iibiyo
Haddii aad u malaynayso inaad ka bukootay cunista alaab dib loo soo celiyay, wac dhakhtarkaaga
• Hubi inaad gurigaaga ku haysato alaabta la soo celiyay
• Ha cunin alaabta dib loo soo celiyay
• Alaabooyinka dib loo celiyay waa in dibadda lagu tuuraa ama lagu celiyaa meeshii laga soo iibsaday
Cuntada ku sumowday Salmonella waxaa laga yaabaa inaanay u muuqan ama urin halaabay laakiin weli way ku xanuujin kartaa. Carruurta yaryar, haweenka uurka leh, waayeelka iyo dadka difaaca jirkoodu daciif yahay ayaa laga yaabaa inay qaadaan caabuqyo halis ah oo mararka qaarkood dilaa ah. Dadka caafimaadka qaba waxaa laga yaabaa inay la kulmaan calaamado muddo gaaban ah sida qandho, madax-xanuun, matag, lallabo, calool-xanuun iyo shuban. Dhibaatooyinka muddada dheer waxaa ka mid noqon kara arthritis daran.
Wax dheeri ah baro:
• Wax badan ka baro halista caafimaad
• Isku qor ogeysiisyada xusuusinta iimaylka oo naga raac warbaahinta bulshada
• Eeg sharaxaadayada faahfaahsan ee baaritaanka badbaadada cuntada iyo habka dib u soo celinta
• Ka warbixi walaaca badbaadada cuntada ama calaamadaynta
Dib u soo celintan waxa kiciyay natiijooyin imtixaan
Ma jiraan cudurro la soo sheegay oo la xiriira isticmaalka badeecadan.
Maxaa la sameynayaa
Hay'adda Kormeerka Cunnada ee Kanada (CFIA) waxay samaynaysaa baadhitaan badbaado cunno ah, taas oo horseedi karta in la soo celiyo alaabtii kale. Haddii alaabada kale ee khatarta sare leh dib loo soo celiyo, CFIA waxay ogeysiin doontaa dadweynaha digniinaha dib u soo celinta cuntada ee la cusboonaysiiyay.
CFIA waxay xaqiijineysaa in warshaduhu ka saarayaan badeecada dib loo soo celiyay suuqa.